ဖုနျးလာရငျ ”ဟယျလို” ဆိုပွီးသာ ထူးကွတာ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာ မသိသေးရငျ ဖတျကွညျ့ပါ – Alanzayar
ဖုနျးလာရငျ ”ဟယျလို” ဆိုပွီးသာ ထူးကွတာ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာ မသိသေးရငျ ဖတျကွညျ့ပါ
ဖုနျးလာရငျ ” ဟယျလို ” ဆိုပွီသာ ထူးကွတာ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာ မသိသေးရငျ ဖတျကွညျ့ပါ… ဖုနျးလာရငျ ” ဟယျလို ” ဆိုပွီး ထူးကွတာဘာကွောငျ့လဲ…?
ဖုနျးဝငျတာဘဲဖွဈဖွဈ ဖုနျးလာတာဘဲဖွဈဖွဈ ” ဟယျလို” ဆိုပွီး စတငျပွောဆိုလေ့ ရှိကွပါတယျ။ ဟယျလိုဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျကို သိကွပါလား?” ဟယျလို ” ဆိုတာ အမြိုးသမီးတဈဦးနာမညျပါ … ။ အဲဒီအမြိုးသမီးနာမညျ သငျသိပါသလား? သူမကတော့ ” မာဂရကျဟယျလို” ပါ။
သူမဟာ တယျလီဖုနျးကို စတငျတီထှငျခဲ့သူ” ဂရဟေမျဘယျလဲ” ရဲ့ ခဈြသူဖွဈပါတယျ … ။ ဂရဟေမျဘဲလျ ဟာ တယျလီဖုနျးကို စတငျတီထှငျပွီးနောကျ ပထမဆုံးသော စကားလုံးအဖွဈ သူ့ရဲ့ခဈြသူ” မာဂရကျဟယျလို” ကို ” ဟယျလို” လို့ စတငျသုံးစှဲခဲ့တာဖွဈပါသတဲ့ … ။
လူတှကေ ဖုနျးတီထှငျခဲ့တဲ့ ” ဂရဟေမျဘဲလျ နာမညျကို မခေ့ငျြမပေ့မေဲ့ သူ့ရဲ့ခဈြသူ ” ဟယျလို” ရဲ့နာမညျကိုတော့ ဘယျတော့မှမမှေ့ာမဟုတျပါဘူး … ။ ဂရဟေမျဘဲလျ ရဲ့ သူ့ခဈြသူပျေါထားခဲ့တဲ့ စဈမှနျတဲ့ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို ပွသလိုကျတာဖွဈကွောငျး ဗဟုသုတအနဖွေငျ့ တငျပွလိုကျရပါတယျ … ။ crd to Yangon Rangon Page
ဖုန်းလာရင် ”ဟယ်လို” ဆိုပြီးသာ ထူးကြတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ မသိသေးရင် ဖတ်ကြည့်ပါ
ဖုန်းလာရင် ” ဟယ်လို ” ဆိုပြီသာ ထူးကြတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ မသိသေးရင် ဖတ်ကြည့်ပါ… ဖုန်းလာရင် ” ဟယ်လို ” ဆိုပြီး ထူးကြတာဘာကြောင့်လဲ…?
ဖုန်းဝင်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းလာတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ” ဟယ်လို” ဆိုပြီး စတင်ပြောဆိုလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဟယ်လိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို သိကြပါလား?” ဟယ်လို ” ဆိုတာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနာမည်ပါ … ။ အဲဒီအမျိုးသမီးနာမည် သင်သိပါသလား? သူမကတော့ ” မာဂရက်ဟယ်လို” ပါ။
သူမဟာ တယ်လီဖုန်းကို စတင်တီထွင်ခဲ့သူ” ဂရေဟမ်ဘယ်လဲ” ရဲ့ ချစ်သူဖြစ်ပါတယ် … ။ ဂရေဟမ်ဘဲလ် ဟာ တယ်လီဖုန်းကို စတင်တီထွင်ပြီးနောက် ပထမဆုံးသော စကားလုံးအဖြစ် သူ့ရဲ့ချစ်သူ” မာဂရက်ဟယ်လို” ကို ” ဟယ်လို” လို့ စတင်သုံးစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါသတဲ့ … ။
လူတွေက ဖုန်းတီထွင်ခဲ့တဲ့ ” ဂရေဟမ်ဘဲလ် နာမည်ကို မေ့ချင်မေ့ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်သူ ” ဟယ်လို” ရဲ့နာမည်ကိုတော့ ဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး … ။ ဂရေဟမ်ဘဲလ် ရဲ့ သူ့ချစ်သူပေါ်ထားခဲ့တဲ့ စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပြသလိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ဗဟုသုတအနေဖြင့် တင်ပြလိုက်ရပါတယ် … ။ crd to Yangon Rangon Page
Previous Article ပနျးရံလုပျရငျး သားဘှဲ့ယူတဲ့ဆီ လိုကျသှားတဲ့အခါ
Next Article မွနျမာ့ ပိုကျဆံ ငှစေက်ကူပျေါက လကျမှတျပိုငျရှငျ မောငျကောငျးဆိုတာ ဘယျသူလဲလို့ နှောငျးလူတို့သိစရေနျအတှကျ